» नेपाल प्रहरीकाे भावी अार्इजिपी काे ?
नेपाल प्रहरीकाे भावी अार्इजिपी काे ?
२०७४, २० चैत्र मंगलवार २०:०२
काठमाडाैं/ गत वर्ष नेपाल प्रहरीको आईजिपी चयनमा शेरबहादुर देउवाले महाभारत मच्चाएका थिए । यो वर्ष आश्चर्यजनक रुपमा इतिहासमै सबैभन्दा कम चलखेल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले चलखेल रोकेका छन् । अहिलेसम्म आईजीका दाबेदारले ओलीसँग भेटेर मलाई आईजी बनाइदिनुपर्यो भनेर भन्ने हिम्मत गरेका छन्, न त ओलीनिकट व्यक्तिले फलानालाई आईजी बनाउनुपर्छ भनेर लबिङ नै गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसामु भावी आईजीको प्रसंग निकाल्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईंलाई आईजीको के चासो ? खुरुखुरु आफ्नो काम गर्नोस् ।
आईजी कसलाई बनाउने हो, समय आएपछि सरकारले गर्छ भनेर झपार्ने गरेका छन् । हक्की स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले भावी आईजीका बारेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत छलफल गरेका छैनन्, भने प्रचण्डले पनि ओलीसमक्ष यो एजेन्डा लगेका छैनन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने आईजी नियुक्तिमा तठस्थ देखिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले फलानोलाई नै आईजी बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिएका छैनन् ।
यसै कारण ओलीले आईजिपीका प्रतिस्पर्धी भेटेका छैनन् भने अरुलाई पनि चलखेल गर्न दिएका छैनन् । को आईजिपी बनाउने होला भनेर जिज्ञासा राख्ने आफ्नै सहयोगी तथा नेताहरुलाई उनको जवाफ हुन्छ– प्रहरी नै आईजिपी हुन्छ ।
अबको ८ दिनभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओली २३ गते शुक्रबार तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन् ।
२६ गते नै उनी फेरि चीन भ्रमणमा जाने चर्चा चलिरहेको छ । जसकारण आईजिपी बढुवामा छलफल तीव्र रुपमा अघि बढेको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की आईजिपी मुख्य दाबेदार हुन् । अन्य डिआईजीहरुको नाम पनि चर्चामा छन् । तर, भावी आईजी यी तिनै जनामध्ये एक हुने स्रोत बताउँछ ।
मुख्य दाबेदार तीनै जना क्षमतावान भएकाले जो सुकै भएपनि प्रहरीले सक्षम नेतृत्व पाउने निश्चित छ । अझ प्रधानमन्त्री ओली आफैंले आईजिपी बढुवामा ठूलो चासो नराखेपछि बढुवामा आर्थिक चलखेल पनि नहुने लगभग निश्चित भएको छ ।
तर, प्रहरी नियमावली र अदालतको आदेशमा फरक फरक प्रावधान भएकाले सरकारलाई आईजिपी नियुक्तिमा केही प्राविधिक कठिनाई भने छ ।
प्रहरी नियमावली सरकारलाई स्वविवेकी अधिकार दिएको छ भने सर्वाेच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्याङकन नम्बरलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
कार्यम्पादन मूल्याङकन नम्बर जोड्न पनि प्रतिस्पर्धीहरु डिआईजी भएका १ वर्ष पनि नभएकाले समस्या भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा भने एआईजी शैलेन्द्र खनाल अरु भन्दा सिनियर भएकाले उनी नै आईजिपी हुने लगभग निश्चित भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । – दृष्टिमा समाचार छ ।